Munhu akangwara anoziva zvekutaura. Munhu akachenjera anoziva kana achinge ataura. - Anotungamira - Quotes Pedia
A akangwara munhu ndiani anoziva zvekutaura chero apihwa mamiriro. Chiitiko icho chaakawana kubva muhupenyu chinomupa iwo muganho pamusoro pevamwe kutarisira chero mamiriro ezvinhu uye kuita maererano. Izvo zvakakosha kuti tidzidze kubva kuhupenyu hwedu pachedu uye nehunyanzvi kugadzirisa kukanganisa kwatakaita munguva yakapfuura.
Wefizikisi akakurumbira uye mufunge Albert Einstein akambotaura kuti munhu asina kumbobvira akanganisa haana kumboedza chero chinhu chitsva. Aya mazwi akapfava anoreva zvakawanda kana ukanyatsofungidzirwa. Isu tinofanirwa kuve nevedu pachedu, toishandisa pakushandisa mamiriro ezvinhu sekusarudza kwedu.
Dzimwe nguva izvi zvinova zvakafanira kana takakomberedzwa nematambudziko mazhinji, uye mhinduro dzinoita senge dzinopera. Kuverenga mabhuku uye kuita hurukuro dzakabereka nemano anehungwaru zvinotibatsira kuti tikure isu pachedu nemagariro.
Tinofanirawo kupa isu nguva inodiwa yakawanda yekufungisisa zvisarudzo zvedu uye kufunga pamusoro pazvo zvine musoro. Kuti uve munhu akachenjera, pakutanga, iwe unofanirwa kuve wakakwana zvakakwana.
Kuchenjera hakuunzi chete nekupfeka zvakanaka pakuchengetedza chitarisiko chekunze chakasarudzika, asi kunouyawo kubva mundangariro uye pakupedzisira kunochenesa muviri nemweya wese. Iyo inogara ichipenya kunze uye kubatsira vanhu kuti vadzoke kubva kumatambudziko avo nekukudziridza chipinero chakananga kuhupenyu.
Kufungisisa uye kurara kwakakodzera, pamwe chete nechikafu chine hutano uye yoga, zvinogona kuratidza kuti zvinobatsira mukuzvibata takagadzikana uye takanyatsoenderana nenguva yakaoma. Rangarira kuti vanhu vanofanirwa kugara vakatarisa pakurarama kwavo voga uye kwete kuraramira vamwe.
Sarudzo uye sarudzo dzehupenyu hwedu dzinofanira kungotungamirirwa nemafungiro edu uye nehungwaru. Hatifanire kupambadza hupenyu hwedu nekutevera chete mirairo nemifungo yevamwe.
Chakanaka kana chakaipa, hupenyu hunodaro, kumagumo, huchatibatsira nguva dzose kuve edu akanakisa. Munhu akachenjera anogara achiteerera zvakanyanya nekutaura zvishoma uye saka, anonyatsoziva nguva yekutaura, kupi kwekutaura, uye kana kutaura kana kwete. Kunyarara chaiko chombo chine simba pane mazwi.
Kuve Smart Quotes
Munhu Akanaka Quotes
Kuvandudzwa kweMunhu Quotes
Kukura Kwemunhu Quotes
Yako Yekufuridzira Quotes
Smart Vanhu Quote
Smart Munhu Quotes
Akangwara murume Zvirevo
Akangwara Man Quotes
Munhu Akangwara Quotes
Hupenyu ndohwe kufambira mberi, kubvuma shanduko, uye kutarisira kumberi kune izvo zvinoita kuti usimbe uye uwedzere kukwana - Asingazivikanwe
Muhupenyu, iwe uchafanirwa kusangana nezvakawanda zvipingaidzo uye kuomerwa asi ita shuwa kuti iwe…
Rovedza pfungwa dzako kuona zvakanaka mune ese mamiriro. - Asingazivikanwe
Vanhu vane tariro vanowanzova nehupenyu hunobudirira kupfuura vanhu vasina tariro. Positivity is…
Kana iwe uchigutsikana nezvauri uye uri kugadzikana kuve iwe pachako. Ndizvozvo chete zvine basa. Ndiani ane hanya nezvinofungwa nevamwe? - Asingazivikanwe
Kana iwe uchigutsikana nezvauri uye uri kugadzikana kuve iwe pachako. Ndizvozvo chete zvine basa. Ndiani ane hanya…
Kutenda chinhu chaunogadzira kana iwe uchizvitenda iwe pachako. - Asingazivikanwe
Kuzvikoshesa uye kuzvimirira zvinotitorera kure kure muhupenyu. Zvisinei nemamiriro ezvinhu, kutenda mu…
Ziva musiyano uripo pakati pekuve nemoyo murefu uye kutambisa nguva yako. - Asingazivikanwe
Zvinhu hazviitike sekuda kwako. Hazvitomboitika panguva yaunoda kuti ivo…